tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 20-09-27
Vao tsy ela akory izay dia toa sahirana i Bitcoin. Na dia toa miovaova be aza ny vidin'ny Bitcoin, ny cryptocurrency dia tao anatin'ny fotoana nanamafisana tao anatin'ny roa herinandro lasa izay, taorian'ny nahavoazana 7,470 $ avo. Mandeha eo anelanelan'ny faritra avo $ 6.000 sy ny faritra ambany $ 7,000. Ne ...
Tamin'ny 31 Oktobra 2008, ID iray nosoniavin'i Satoshi Nakamoto no namaha an'ity olana ity tamin'ny taratasy 9 pejy momba ny fomba andoavako vola ahy amin'ny tambajotran-tserasera tsy mitonona anarana sy manana fizaram-pahefana tanteraka. Fantatsika izao fa ilay lehilahy miafina fantatra amin'ny anarana hoe Satoshi Nakamoto sy ireo pejy sivy ireo dia noforonina tamin'ny rivotra manify mitovy amin'ny volavolan-dalàna 100 ...
Tamin'ny 700 taona talohan'ny namoahan'i Suède ny vola taratasy eropeana voalohany tamin'ny 1661, dia nanomboka nandinika ny fomba hampihenana ny enta-mavesatry ny olona mitondra vola madinika varahina i Shina. Ireo vola madinika ireo dia manahirana ny fiainana: mavesatra izy io ary mampidi-doza amin'ny dia. Taty aoriana dia nanapa-kevitra ny mpivarotra hametraka ireo vola ireo amin'ny ...
btc fitoeran-javatra, kaontenera antbox, fitaovana fitrandrahana crypto, kaontenera antminer, fitoeran-javatra bitmain, crypto mining asic,